पर्यटनको योजना बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता ! « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
नेपाल इन्स्योसेन्सको हकप्रद र बोनस घोषणा, कती पुग्नेभयो चुक्ता पुँजी ?
काठमाडौ । नेपाल इन्स्योरेन्सले ३० लाख १९ हजार ८८६ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ
को होला सिइओ अफ दि इयर ? भोली देशले पहिलो सिइओ अफ दि इयर पाउने
काठमाडौँ । नेपालमै पहिलो पटक आयोजना गरिएको नेपाल सिइओ सम्मेलनको तयारी पुरा भएको छ ।
६ सय ७० रुपैँया बजारमूल्य रहेको इन्स्योरेन्सको १२ हजार ५ सय कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाडौ । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले हकप्रदमा नबिकेको १२ हजार ५०३ कित्ता सेयरको सर्वसाधारणका लागि लिलामी